ရေချိုးကော်လံကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။ သတင်း- Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
1. ပစ္စည်းကိုထိပါ- သင် တို့ထိနိုင်ပါသည်။ရေချိုးကော်လံအပေါ်ယံပစ္စည်းကို ခံစားရစေရန်နှင့် ခံစားရခြင်း။ ရေချိုးခန်းကော်လံတံဆိပ်သည် ချောမွေ့မှုရှိမရှိနှင့် ချိတ်ဆက်မှုတွင် အက်ကြောင်းများ ရှိမရှိကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဒါတွေက သတိထားရမယ့်နေရာတွေပါ။
2. အမြင့်ရွေးချယ်ခြင်း- ရေပန်းကော်လံ၏ စံအမြင့်မှာ 2.2 မီတာဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသည့်အခါ တစ်ဦးချင်းစီ၏ အမြင့်အလိုက် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေအရ faucet သည် မြေပြင်အထက် 70 ~ 80 စင်တီမီတာ၊ lifting rod ၏အမြင့် 60 ~ 120 cm ၊ faucet နှင့် ရေချိုးကော်လံကြားရှိ အဆစ်အရှည် 10 ~ 20cm နှင့် အထက်ရေချိုးခေါင်း၏အမြင့်၊ မြေသားသည် 1.7 ~ 2.2 မီတာဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူသည့်အခါတွင် စားသုံးသူများသည် ရေချိုးခန်းနေရာကို အပြည့်အဝ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အရွယ်အစား။
3. အသေးစိတ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးခြင်း- ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ပါ။ အဆစ်များတွင် မျက်ခမ်းစပ် သို့မဟုတ် အက်ကြောင်းများ ရှိနေခြင်း ရှိမရှိကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ မျက်ခမ်းစပ်ရှိလျှင် ရေကုန်သွားပါက ရေများ ယိုစိမ့်ကာ ပြင်းထန်စွာ ကွဲအက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
4. အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစစ်ဆေးပါ။ရေချိုးကော်လံ: မဝယ်မီ၊ ထုတ်ကုန်အတွက် ရေဖိအားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မေးပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက ရေချိုးကော်လံကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် ထိရောက်မှု ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ရေဖိအားမလုံလောက်ပါက ရေဖိအားကို ဦးစွာစစ်ဆေးပြီး booster motor တပ်ဆင်နိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သော:ရေချိုးခေါင်းမှာ ရေနည်းနည်းရှိရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
နောက်တစ်ခု:ရေချိုးပိုက်များ ပျက်စီးရခြင်းအကြောင်းအရင်းနှင့် ပြုပြင်နည်းများ